Real estate – Sale - လုံးချင်းအိမ် အမြန်ရောင်းမည် | Free classifieds ads | Myanmar marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: လုံးချင်းအိမ် အမြန်ရောင်းမည်
လုံးချင်းအိမ် အမြန်ရောင်းမည် ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #အိမ်ကြီး_အိမ်ကောင်းမှာ_မိသားစု_သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း_နေချင်သူများအတွက် မေလိခအိမ်ယာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မြေအကျယ်(30' x 90') အဆောက်အဦး (၆၅၀၀ စတုရန်းပေ)5Master Bedrooms +2Living Rooms Driver/ Maid Rooms, ဘုရားခန်းကျယ် Family KTV Room, ကျွန်းပါကေးခင်း ကား (3) စီးအလွယ်တကူရပ်လို့ရ ဂရံအမည်ပေါက်၊ အသင့်နေ ၂၄ နာရီ လုံခြုံရေး + ပါတ်ဝန်းကျင်ကောင်း ----------------------------------- ရောင်းစျေး - ၈၅၀၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း) Shwe Myanmar Property Real Estate Contact. ..09699006990 Contact. ..09950000708 -----------------------------------